Karbônina Info. About. What's This?
Kintana sahozanina fotsy
Ny karbônina dia zavatra simika manana eva C ary manana lahatra atômika 6. Ny lanja atômikany dia 12.0107. Efa nisy teto an-tany ny karbônina hatry ny fisian ny masoandro: vita avy amin ny niokleôsintezin ny kintana nipoaka ny karbônina talohan ny fiforonan ny masoandro sy ny fajiry. Ny petraka, ny arin-tany, ny solitany, ny manjarano ary ny diamondra. Ny diamondra mety misy anatin ny kimberlitan ny afotroa, indrindra any Afrika Atsimo sy any Arkansas. Mety misy diamondra kely varavety anatin ny vato avy any amin ny habakabaka. Tsy nisy ny karbônina tamin ny fotoan ny Big Bang niokleôsinte ...
Ny vy dia zavatra simika, manana eva Fe ary manana isa atômika 26. Io no zavatra ferômanetika tena fantatra ary tena hita matetika indrindra aminny fiainana mandavanandro. Ny vy tsotra dia metaly malemy, fa raha asiana lotondoto kely fotsiny izy, dia lasa mafimafy kokoa: raha afangaro amin ny metaly hafa izy na amin ny karbônina, dia lasa mbola mafy be noho ny vy madio.
Ny fihafananny tany dia fiakaranny hafananny Tany. 0.74°C mafana kokoa nohonny taminny 150 taona lasa ny mari-pana ankehitriny. Ny mahatonga izany dia fitomboanny tahanny diôksida karbônina ao aminny soson-drivotra iainana, araka ny nambaran Svante Arrhenius efa zato taona laza izay. Rehefa mampiasa angovo fôsily toa ny arin-tany na ny solitany ny olona dia mampitombo ny tahanny diôksida karbônina a aminny soson-drivotra iainana. Mitombo ihany koa ny taha rehefa aringana ny ala, satria manala ny diôksida karbônina aminny soson-drivotra ny zavamaniry. Rehefa mafana ny hafananny Tany dia mia ...
Ny Masoandro dia kintana eo anivonny rafi-planeta misy ny Tany atao ho Rafi-planetanny Masoandro. Ny savaivony dia misy 1 392 000 km eo ho eo. 99.86%-nny lanjanny Rafi-planetanny masoandro ny lanjanny masoandro, ao ny asteroida, ny komety ary ny fajiry. Ny masoandro dia voaorinny hidirozenina, helioma ary ny 3% sisany dia zavatra toy ny okzizenina, ny argôna, ny neôna, ny vy sy karbônina. Eny an-danitra, fotsy ny lokonny masoandro, mety mivadika mavomavo koa ny masoandro noho ny hahaka. Ny sokajinny masoandro dia G2V, tenenina tsotra hoe kintana mavo noho ny sandrahany mavo-maintso eo amin ...
Ny kintana sahozanina fotsy dia ny sisa tavelan avo hakitroka avy aminny fivoaranny kintana manana lanja hatraminny lanjamasoandro 8. Ny sahozanina fotsy dia tsy itranganny fiota termôniokleary tahaka ny aminny kintana tsotra intsony. Na dia izan aza, dia manam-pana avo foana ilay izy mandritry ny fotoana lava, izay mahatonga azy ho omena anarana hoe sahozanina fotsy. Ny lanjanny kintana sahozanina fotsy dia kely noho ny lanjanny Masoandro fa manana hadiry mitovy aminny Tany. Ny hakitroky ny zavatra manorina ny sahozanina fotsy dia akaikinny 1.000.000kg/cm³ any ho any. Ny manorina ireo sah ...
Ny" fiainana ivelan-tany” dia mamaritra endrika fiainana isan-karazany izay misy any ivelan’ny fajiry," Tany”. Mbola tsy voaporofo ny fisiany. Ary, hatramin’izao dia tsy mbola nisy fiainana ivelan-tany hitan’ireo siantifika ireo. Kanefa, misy famantarana sasantsasany izay manamarika fa mety hisy fiainana mikraoby any amin’ny fajiry Mars. Ny famelabelarana sy ny fanandramanan’ny teoria mikasika ny fiainana ivelan-tany dia ny eksobiôlôjia" exobiologie” na astrobiôlôjia ; kanefa ny astrobiôlôjia mbola manarona ny fianaranan’ny fiainana an-tany amin’ny an-lalanan’ny fijerena haikintana.
I Roanda na Repoblikan i Roanda dia firenena ao amin ny faritra atsinanan i Afrika, ao amin’ ny ivon’ ny faritry ny Farihy Lehibe. I Kigali no renivohiny. Manana velarana mirefy 26 338 km² i Roanda. Ireto ny manodidina azy mivantana: i Oganda no ao avarany, i Tanzania sy i Borondy no ao atsimony, ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô sy ny farihy Kivu no ao andrefany, ary i Kenia no ao atsinanany. Atao hoe Rwanda na Republic of Rwanda izy amin ny teny anglisy fa Rwanda na Republique de Rwanda koa amin ny teny frantsay. Atao hoe Repubulika yu Rwanda izy amin’ ny teny kiniaroanda, Republic of Rw ...
Ny tantaran i Roanda dia voamariky ny fisian ny fanjakana maro madinidinika izay samy nahitana ny foko Hoto sy Totsy ary Toà, fahatongavanny Eorôpeana, fanjanahan-tany, fahaleovan-tena, ny ady an-trano teo aminny Totsy sy ny Hoto izay niteraka ny fifandripahana, ny fifampitsabahana aminny raharahan ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fampihavanam-pirenena sy ny fizorani Roanda mankany amin ny demôkrasia.
Ny tsỳ na vy mahery dia tangaro-metaly ahitana indrindra ny vy sy karbônina miloko volombatolalaka. Ny habetsahan ny karbônina no mamaritra ny toetran ny tsỳ. Mety ko hita ao amin ny tsỳ koa ny manganezy na ny nikela na ny môlibdena sy ny maro hafa, arakaraka ny hampiasana ilay metaly.
Ny sagoaga dia taovam-pisefoana hita aminny biby miaina an-drano. Izy io dia ahafahanireo biby ireo maka ny ôksizenina aminny rano amoahana diôksida karbônina.